Massimiliano Allegri oo Hoos u Dhigay Wararka Sheegaya inuu Midkood Arsenal ama Chelsea Qaban Doono – Gool FM
CR Shariif April 16, 2018
(Italy) 16 April 2018. Macalinka kooxda Juventus Massimiliano Allegri ayaa meel iska dhigay wararka sheegaya inuu ka dhaqaaqao kooxda Biancanero wuxuuna tilmaamay inuu baaqi usii ahaan doono kooxdiisa labada sano ee sooo aadan.
Waxaa soo baxayay maalmihii dambe in hogaamiyahan 50 sano jiraa uu u dhaqaaqi doono horyaalka Premier League maamada uu bilaabay barashada luqada English-ka.
Balse macalinkii hore ee kooxaha Cagliari iyo AC Milan ayaa laga xigtay kadib ciyaartii ay guusha ka gaaren dhigooda Sampdoria in uusan hubin waxa ku dhici kara kooxdiisa xagaage dambe,laakiin uu si cad u sheegay in uu xiiseyneynin shaqada midkood kooxaha Arsenal ama Chelsea, oo labadaba eeyaga macalimiin cusub.
“waxaan heystaa heshiis ilaa 2020 waana ku faraxsanhay halkan. Sido kalana waan is fahan sanahay kooxdeyda ,” ayuu u sheegay Allegri Mediaset Premium. “waxaan u baxayaa fasax markii uu furmo suuqa kala iibsiga sababtuna waan rumeysanahy kooxda.
Weli waxaan u baahanahay inaan gaarno hadafyada qaar, hadii aan ku guuleysaneyno Scudetto iyo Coppa Italia, iyagu awood ayeey u leeyihiin hadii ay I dooneynin laakiin waan ka hadli doonaa waxa aan mar walba sameynayo,sanad kastaa . ma jiro wax isbadal ah .”
Kooxda Monaco oo Suuqa Dhigeysa Bartilmaameedkii Kooxaha Arsenal iyo Liverpool